Mmetụta Social Media gosipụtara na Ahụmịhe Ndị Ahịa | Martech Zone
Mgbe azụmahịa malitere ịbanye na ụwa nke mgbasa ozi mmekọrịta, e jiri ya dị ka ikpo okwu iji zụọ ahịa ngwaahịa ha ma mụbaa ahịa. N'ime afọ ole na ole gara aga, agbanyeghị na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke nwere mmasị n'ịntanetị - ebe ị ga-emekọrịta ihe n'ụdị ha masịrị ha, ma nke ka mkpa, chọọ enyemaka mgbe ha nwere nsogbu.
Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-achọ ka ha na ndị ahịa kwukọrịta site na mgbasa ozi mmekọrịta, ụlọ ọrụ gị agaghị enwe ike ịsọ mpi ma ọ bụrụ na ị sonyeghị. Mmekọrịta ọ bụla, na ileghara ndị ahịa anya abụghị nhọrọ - ime nke a ga - enwe mmetụta na-adịghị mma na ahụmịhe ndị ahịa, na n'aka nke ya, mebie akara gị.
Ọwa A Họọrọ Karị
You ma ihe kpatara ndị ahịa jiri hụ social media n'anya nke ukwuu? Ọ na-enye ha ike ịjụ ajụjụ ma hapụ nzaghachi na nnọkọ ọha na eze ebe azịza gị gosipụtara maka mmadụ niile hụ - ma kwere m, ndị ahịa ndị ọzọ na-ele anya nke ọma. A ọmụmụ site na Conversocial achọpụta na 88% nke ndị na-azụ ahịa anaghị enwe ike ịzụta site na akara nke azaghị mkpesa ndị ahịa na mgbasa ozi. N’ụzọ bụ isi, ndị gị na ha na-azụ ahịa na-echebara otu gị na ndị ahịa gị echiche.
Ndị na-eri ihe taa amarawo inweta azịza ozugbo. Mgbe ndị ahịa jụrụ ajụjụ na mgbasa ozi mmekọrịta, ha na-atụ anya na ị ga-alaghachikwute ha ngwa ngwa na azịza. N'ezie, 42% nke ndị ahịa na-atụ anya nzaghachi n'ime otu awa, na 32% na-atụ anya na oge ahụ ga-adị n’ime nkeji iri atọ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ị ga-enwerịrị mkpịsị aka gị oge niile site na ị na-enyocha ihe ndekọ mgbasa ozi mmekọrịta oge niile iji hụ nkọwa na ajụjụ ka ha na-abata.
Ọ bụrụ n'ịchọta akara gị n'etiti nsogbu mgbasa ozi mmekọrịta, ịkwesịrị ịnwe nsogbu a na-ajụ ma nye azịza ozugbo. Ọ bụrụ na ị (ma ọ bụ ndị ọrụ gị) enweghị ike ịnye azịza ozugbo, hụ na onye ahịa ị na-arụ ọrụ na ya ma soro ya ozugbo ị nwere azịza. Ihe ikpeazu ichoro ime bu ka ndi ahia gi ghara inwere ndidi site na ileghara ha anya ma obu ileghara ha anya- nke nwere ike ibute ya nsogbu.
Ọbịbịa buru ibu
Na ụbọchị tupu mgbasa ozi mmekọrịta, ndị na-eri ihe nwere ike isoro ndị ezinaụlọ ole na ole, ezi ndị enyi na ndị ọrụ ibe gị kerịta ahụmịhe ọjọọ. Maka ụlọ ọrụ, nke a bụ nọmba nwere ike ịchịkwa. Agbanyeghị, na ọbịbịa nke Facebook na Twitter, ndị ahịa na-ewe iwe nwere ọnụ ọgụgụ na-enweghị ngwụcha nke ndị mmadụ iji nwetaghachi akụkọ ifo nke ndị ahịa buru ibu na ngwaahịa ndị na-adịghị mma.
Onu ogugu gburugburu ihe ohuru a abughi ihe obula o zere:
45% nke ndị na-azụ ahịa na-ekerịta ahụmịhe ndị ahịa na-adịghị mma site na mgbasa ozi mmekọrịta (Nnyocha Dimensional )
71% nke ndị na-azụ ahịa na-enweta ngwa ngwa ngwa ngwa ma dị irè na mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịkwado akara ahụ na ndị ọzọ, ma e jiri ya tụnyere naanị 19% nke ndị ahịa na-anataghị azịza. (NM kpaliri)
88% nke ndị mmadụ tụkwasịrị obi na nyocha ndị ntanetị nke ndị ahịa ndị ọzọ dere dịka ha tụkwasịrị obi na nkwenye sitere na kọntaktị onwe ha. (BrightLocal)
Mgbe ụlọ ọrụ na-eme ma na-aza ndị ahịa na-arịọ maka ọrụ gbasara mgbasa ozi mmekọrịta, ndị ahịa ahụ na-etinye 20% na 40% ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ. (Bain & Companylọ ọrụ)
85% nke ndị na - akwado ụdị ụdị na Facebook kwadoro ndị ahụ maka ndị ọzọ (Mmekọrịta)
Ndị ahịa dị 71% yikarịrị ka ha ga-azụ ahịa dabere na ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-ezo aka (Hubspot)
Ndị ahịa gị nwere ike iru na mmetụta karịa ka ọ dị na mbụ, ọ ga-abụkwa ihe kachasị mma nke ụlọ ọrụ gị iji mee ka ha nwee obi ụtọ site na isoro ha na mgbasa ozi mmekọrịta ngwa ngwa na oge ọ bụla enwere ike.
Nwere ike ịkwalite ahụmịhe ndị ahịa site na itinye aka na mmekọrịta gị na ntanetị mgbasa ozi gị. Ndị ahịa gị na-etinyekarị mkpebi mkpebi na mmetụta uche, karịa mgbagha - ọ nweghịkwa dochie anya mmekọrịta mmadụ na ịzụlite njikọ mmetụta uche.
Nwere ike ịzụlite njikọ mmetụta uche ma nweta ihu ọma na asọmpi gị site n'ịhụ na ndị ahịa gị mara na a hụrụ ha ma nwee ekele.
Zaghachi ngwa ngwa na ozi ha.
Gaa na ndị mmadụ n'otu n'otu mgbe ha kwuru ma ọ bụ kesaa ozi gị.
Jụọ maka nzaghachi.
Zipu ozi ekele gị na soshal midia mgbe ha zụrụ ihe.
Nye ha ego na ihe ha masịrị ha.
Dabere na Ahịa Force, na-ekwusi ike na ahụmịhe ndị ahịa na-arụpụta afọ ojuju dị elu na oge 2-12 dị elu nkwenye ọkwa - nke abụọ nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na iguzosi ike n'ihe ndị ahịa na ego ha nwetara. Mgbe ị na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe n'ụzọ ziri ezi, ọ ga-enwe mmetụta dị mma na ahụmịhe ndị ahịa - na onye maara, ị nwere ike mechaa gbanwee ndị ahịa obi ụtọ ka ha bụrụ ndị na-akwado akara.
Tags: ọjọọ ahịa ọrụbathenwu gbaamkparịta ụkaahụmahụ ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa nkwadoakụkụ nyochammetụta ucheọrụokpokorommetụ mmadụezumike na mmekọrịtaahịanm kpaliemkpebi ịzụtairuelekọta mmadụ mediamkpụrụ obi nke ụdịsupportOnyebuchi
Anna Levis kwuru
Dee 21, 2016 na 9: 55 AM
Otu uru kasịnụ nke mgbasa ozi mmekọrịta maka azụmahịa bụ iji ya mee ka okporo ụzọ weebụsaịtị gị bawanye. Ọbụghị naanị na mgbasa ozi mmekọrịta na-enyere gị aka iduzi ndị mmadụ na weebụsaịtị gị, mana ka mgbasa ozi mgbasa ozi ị na-enweta, ogo ogo ọchụchọ gị ga-adị elu.
Dec 21, 2016 na 1:22 PM
N'izi ọpụpụ, nke ahụ bụ eziokwu… ma Google kwuru na mbụ na ọ dịghị ahu nagide na-elekọta mmadụ nkekọrịta ozugbo iji chọpụta ọkwá. N’ụzọ na-adịghị mma, ịkesa mmekọrịta gị na ndị mmadụ na-emekarị ka ndị ọzọ kerịta ma kwuo maka ya. Mgbe njikọ ndị ahụ dị mkpa na-achọta ụzọ ha gaa na saịtị dị mkpa, mgbe ahụ ọ na-enyere aka ogo.